Musuq maasuq maka baaqsan kartaa doorashada Golaha Shacabka? | KEYDMEDIA ONLINE
Musuq maasuq maka baaqsan kartaa doorashada Golaha Shacabka?
Wal wal xooggan oo ku aaddan inuu musuq maasuq ragaadiyo ayaa laga muujinayaa xilligan doorashada Golaha Shacabka ee Soomaaliya, maadaama aysan wax badan ka badalneyn tii dhacday 2016-kii oo wax is-daba marin iyo musuq ba’an lagu eedeeyey.
MUQDISHO, Soomaaliya - Soomaaliya ayaa ah dal 30-kii sano ee tagay ay daashadeen Dagaalo Sokeeye iyo kuwa diimeed, waxaana ay taasi keentay inuu gabi ahaanba bur buro heykalkii dowladnimo isla markaana ay Dunida Soomaaliya u aragto goob aan lahayn amaan la isku haleyn karo iyo muuqaal Qaranimo oo tiir adag leh.
Hase ahaatee 10-kii sano ee la soo dhaafay guud ahaan Soomaaliya waxaa muuqanayey da'daallo ka turjumaya soo noleynta nimaadki dowladnimo ee lumay waxana dalka ka dhacayey doorashooyin qori isku dhiib ah oo u ogolaanayey hadba qofkii hela inta badan codadka Barlamanka inuu dalka daadihiyo muddo 4 sano ku siman.
Xiligan waxaa lagu guda jiraa doorashadii dalka oo ah mid dadban waxana mudanayaasha Golaha Shacabka oo gaaraya 275 xubnood soo xulaya ergo tiradoodu tahay 101, kuwaasoo dhamaantood aan la isku haleyn karin daacad ahaanshahooda.
Doorashadii 2016-kii ayaa waxaa dul hoganaya eedeymo la xiriira musuq maasuq baahsan oo ay ku kaceen ergadii soo xuleysay mudanayaasha Barlamankii 10-aad, waxana dadka qaar ay aaminsan yihiin in ergada iminka soo xuleysa Barlamanka 11-aad aysan ka baaqsan karin tallaabadaasi.
Dadka gorfeeya siyaasada ayaa ku doodaya in ergada sababaha ay uga mid noqonayaan hanaanka doorashada ay kaalin weyn ku leedahay damacooda ah meel marinta danahooda shaqsiyeed, taasoo sida la sheegayo kala weyn ka qaranimo ee xusul duubka loogu jiro.
Tuhun aad u ballaaran ayaa la galinayaa in ergada ay ku suntanaan doonaan dad ka nadiif ah masuq maasuq iyo eex waxana taa badalkeeda ay Soomaalidu aamisan tahay in ay u xaglin doonaan kuwa ay dhaqaalaha ka heleen sidii dhacday 2016-kii
Dadka ka soo horjeeda fikirkaasi ayaa sheegaya in ergadan oo ka badan kuwii 2016-kii aan la wada qancin karin, maadaama tiradoodu tahay 101 ergo isla markaana aysan jirin cid dhaqaale la gaarta.
Saaxiibada Soomaaliya ayaa ka digay in doorashada dalka ay hareeyaan masuq maasuq iyo wax is daba marin, iyagoo dhinacyada howlaha doorashada qeybta ka ah kula taliyey in ay qabtaan doorasho daah furan oo ku saleysan cadaalad.
Si kastaba ha ahaatee waxaa arin tuhun weyn laga qabo ah in ay hab cadaalad ah ku qabsoomaan dhamaan doorashooyinka Soomaaliya, waxana doorashadan ay noqoneysaa mid dunida u bidhaamineysa hilinka ay ku socoto Soomaaliya iyo kalsoonida lagu qabi karo doorashadooda.